သင်က ဘယ်လို သက်သက်လွတ်သမားမျိုးလဲ - Hello Sayarwon
သင်က ဘယ်လို သက်သက်လွတ်သမားမျိုးလဲ
Dr.Aye Myat Myat Noe မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူအများစုအတွက် သတ်သတ်လွတ်သမားဆိုတာ အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဘဲ အကုန်ရှောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ သင်ထင်ထားတာထက်သတ်သတ်လွတ်မျိုးစုံရှိပါတယ်။ အသားအကုန်ရှောင်တဲ့သတ်သတ်လွတ်သမား၊ အသားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ထွက်ကုန် ဥပမာ- ဥမျိုးစုံ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း အပြင် သိုးမွေး၊ တိရစ္ဆာန်သားရေ၊ ပိုး ထိရှောင်တဲ့ သတ်သတ်လွတ်သမား တွေတော့ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် lacto သတ်သတ်လွတ်သမား နဲ့ lacto-ovo သတ်သတ်လွတ်သမားအကြောင်းကြားဖူးပါသလား။ သင်ကသတ်သတ်လွတ်သမားဆိုရင် ထိုအမျိုးအစားတွေထဲမှာ ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ။်
လိုက်လျောညီထွေသမားလို့ခေါ်ကြတယ်။ ပုံမှန်သတ်သတ်လွတ် သော်လည်း တခါတရံ တချို့သောအသားများနဲ့ ပင်လယ်စာများ ပါတတ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်အသားရှောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြက်သား သို့ ငါးသာစားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တဝက်သတ်သတ်လွတ်သမားဖြစ်ပါက လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်၊ သတ္ထုဓါတ်တွေလုံလောက်အောင်စားဖို့အကြံပြုပါရစေ။ အဆီများလွန်း၊ ကယ်လိုရီများလွန်းတာတွေလည်းရှောင်သင့်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုသတ်သတ်လွတ်လို့ထင်သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် Lacto-ovo သတ်သတ်လွတ်သမားပါ။ အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဘဲ အကုန်ရှောင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥတွေနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေတော့မရှောင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထိုသတ်သတ်လွတ်သမားတွေရဲ့ အာဟာရလိုအပ်မှုဟာ သာမန်အသားစားသူတွေလိုအပ်မှုနဲ့တူတူပဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့၊ အမြဲ အာဟာရလုံလောက်အောင်စားဖို့ဂရုပြုပါ။
အသားရှောင်တာကြောင့် ဗီတာမင်-ဘီတွဲ၊ ဗီတာမင်-ဒီ၊ သံဓါတ်၊ ပရိုတင်းဓါတ်၊ ဇင့်ဓါတ် နဲ့ riboflavin တို့လုံလောက်အောင်ဖြည့်စွတ်ဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဆေးပညာလေ့လာမှုတွေကတော့ သတ်သတ်လွတ်သမားတွေဟာ အစုံစားသူတွေနဲ့ အာဟာရတူတူရတဲ့အပြင် သိသာတဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး တွေဗတာင်ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုကောင်းကျိုးတွေက သတ်သတ်လွတ်သမားတွေမှာ ပြည့်ဝဆီနည်းပြီး ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်၊ အမျှင်ဓါတ်၊ ဖောလစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင်-အေ၊ ဗီတာမင်-စီ နဲ့ အီး တို့လုံလောက်စွာပါနေလို့ဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့ဥတွေပါမစားတဲ့သတ်သတ်လွတ်သမားပါ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ဒိန်ခဲ၊ နို့ နဲ့ ဒိန်ချဉ် တို့တော့စားသုံးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် lacto သတ်သတ်လွတ်သမားတွေမှာ အပင်အခြေခံအစာများအကုန်ပါပါတယ်၊ အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက်၊ အစေ့အနှံတွေ၊ အခွံမာသီးနဲ့ ပဲမျိုးစုံအပြင် နို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ထောပတ်၊ ဆိတ်ဒိန်ခဲ၊ ဆိတ်နို့ နဲ့ ထိုအရာတို့မှပြုလုပ်သော ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့ အစာများပါ စားသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဝက်၊ ဥတွေတော့မစားပါဘူး။
တကယ်လို့သင်က lacto သတ်သတ်လွတ်သမားဆိုရင်တော့ သင့်တစ်ရက်တာစားသောက်မှုမှာ အောက်ပါတို့ပါသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်-
ဆီလက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်း၊ ၃ ဇွန်း။
အစေ့အဆန် ၂ ပွဲ(တစ်ရက် ၂ ကြိမ်)ခန့်။
နို့ထွက်ပစ္စည်း ၃ ပွဲ
အသီးအရွက် ၂ ပွဲမှ ၄ ပွဲ။
အစိမ်းရောင်အသီးအရွက် ၂ ပွဲမှ ၃ ပွဲ။
ပဲနဲ့ပရိုတင်းများ ၂ ပွဲမှ ၃ ပွဲ။
အသီးအနှံ ၁ ပွဲမှ ၂ ပွဲ။
သစ်သီးခြောက် ၁ ပွဲမှ ၂ ပွဲ။
အနှံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစားစရာ ၆ ခုမှ ၁၀ ခု။
နို့ထွက်ပစ္စည်း တစ်ရက် ၃ ပွဲ(တစ်ရက် ၃ ကြိမ်ခန့်) စားသင့်ပြီး ဗီတာမင်-ဘီတွဲပါဖို့အတွက် မနက်စာစီရီယယ်စားသင့်ပါတယ်။
သတ်သတ်လွတ်သမားတွေလိုပဲ တိရစ္ဆာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံး ဥ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေအပြင် သားရေ၊ ပိုး၊ သိုးမွေး တွေနဲ့ တခြားတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းဘာမှမသုံးပါဘူး။ Vegans တွေက သူတို့နေထိုင်မှုပုံစံဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုလှပပြီး လူသားပိုဆန်ဖို့အတွက် ထိုကဲ့သို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မပြည့်စုံပေမယ့် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေထိုင်ဖို့က သူတို့တာဝန်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ရင်းမြစ်အကုန်ရှောင်ပါတယ်။ ဥတွေ၊ နို့ထွက်စားစရာတွေ၊ အရိုးနဲ့တွယ်ဆက်တစ်သျူးကနေလုပ်တဲ့ gelatin တွေအပြင် ပျားရည်တောင်မှ ရှောင်တဲ့စာရင်းထဲပါပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့တင်းကြပ်တဲ့စားသောက်မှုပုံစံကြောင့် ထိုသူတွေရဲ့ တစ်ရက်စားသောက်မှုမှာ ဒါတွေပါသင့်တယ်ဆိုပါတယ် –
အနှံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစာ ဥပမာ ပေါင်မုန့်၊ ကယ်စီယမ်ပါစီရီယယ် ၆ ပွဲ( ၆ ခါစား)
ပဲ၊ အစေ့အဆန်၊ အခွံမာသီးနဲ့ တခြားသော မြေပဲ၊ ထောပတ်၊ တိုဖူး၊ ကုလားပဲ၊ အာလူး၊ ပဲပိစပ် ကဲ့သို့ပရိုတင်းကြွယ်ဝသောအစာများ ၅ ပွဲ(၅ ခါစား)
အရွက် ၄ ပွဲ။
အသီးအနှံ ၂ ပွဲ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သောအဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ထောပတ်သီးနှင့်အုန်းသီး ၂ ပွဲ။
ဘယ်လိုသတ်သတ်လွတ်သမားဖြစ်လာမလဲ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ သင်မည်သည်တို့ကိုစားချင်လဲ၊ ရှောင်ချင်လဲစဉ်းစားပါ။ ထိုအမျိုးအစားတွေနဲ့အတိအကျကိုက်ညီစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကိုနားလည်ထားတာကသင့်ကိုကျန်းမာရေးညီညွတ်စွာနေဖို့ဘာလုပ်သင့်လဲသိစေမှာပါ။
Hello Health Group မှ အခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများ၊ ကုသမှုများမပေးပါ။
Types of vegetarians. http://vegetarian.about.com/od/vegetarianvegan101/tp/TypesofVeg.htm. Accessed August 30, 2016.
What Kind of Vegetarian Are You? http://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/types-of-vegetarians.aspx
Vegan DietOverview. http://health.usnews.com/best-diet/vegan-diet. Accessed August 30, 2016.
Semi-vegetarian diet plan. http://www.livestrong.com/article/239528-semi-vegetarian-diet-plan/. Accessed August 30, 2016.
Melina, Vesanto, and Brenda Davis.The New Becoming Vegetarian. Summertown, Tenn.: Healthy Living Publications, 2003. Print. Page No. 1-3.
Morning မှာ Garlic Tea လေး သောက်ပေးပါ။
ကြယ်ပုံစံ ဇီးဖြူသီးလေးတွေ ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး